ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ ပြောပြတဲ့ ဓမ္မတာလာခြင်း နဲ့ လွဲမှားနေတဲ့ အယူအဆများအကြောင်း - For her Myanmar
ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ ပြောပြတဲ့ ဓမ္မတာလာခြင်း နဲ့ လွဲမှားနေတဲ့ အယူအဆများအကြောင်း
လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ကိစ္စပါ ပါတယ်နော်..
ဒေါက်တာဖြိုးသီဟ လို့ဆိုလိုက်ရင် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးတွေကို အသိပညာပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်၊ လူငယ်လေးတွေအတွက် အသိပညာပေး စာတွေ ရေးသားပေးနေတဲ့ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ရယ်လို့ မြင်မိကြပါလိမ့်မယ်။ “ဓမ္မတာ လာခြင်း” နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော.. ဆရာ့မှာ ဘယ်လို အမြင်မျိုးတွေ ရှိနေပါလိမ့်…
ရာသီလာခြင်းက ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ မြင်နေကြတဲ့ အမြင်တွေ နောက်မှာ
၁။ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
“ဒီနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ ရာသီလာတယ်ဆိုတာကြီးက ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ မြင်ကြပါတယ်။ အဲဒီအမြင်ကနေ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေက ရာသီလာလို့ရှိရင် ဒါ ရှက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့.. ဘယ်သူ့မှ မပြောဘူး၊ အမေတွေကိုတောင် မပြောဘူး ဆိုတာမျိုးတွေ ရှိတယ်ပေါ့နော်..
တကယ်တမ်း Menstruation ဖြစ်တယ် (ရာသီလာတယ်) ဆိုတာက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ အကြီးမားဆုံး အပြောင်းအလဲလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါပြီးရင် ထပ်ပြီးတော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ အကြီးမားဆုံး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘယ်သူ့ရဲ့ အကူအညီ၊ ဘယ်သူ့ရဲ့ အကြံဉာဏ်ပေးမှု၊ ဘယ်က ဗဟုသုတမှ မရဘဲနဲ့ သူက ဒီဟာကို ဘယ်လို Handle လုပ်မလဲ။ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲခါကျတော့ ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ အများကြီးတက်လာတယ်။”
၂။ ဓမ္မတာ လာခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ အသိပညာ မရကြပါဘူး။
အဲ့အပြင် ဘာဖြစ်သေးလဲဆိုတော့ တစ်ခုခု သိချင်လို့ မေးမယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့သူတွေက မှန်ကန်တဲ့ အဖြေမပေးနိုင်ဘူး။ ဘာလို့ မပေးနိုင်လဲဆိုတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း မှန်မှန်ကန်ကန် အသိပညာ မရှိဘူး။ ဘာလို့ မရှိလဲဆိုတော့ ခုနက ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို ဒါကြီးက ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အယူကြောင့်။ အဲဒီတော့ ဆက်ပြီးတော့မှ ပြောကြမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအပိုင်းမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိလာတယ်။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုတွေ မရလာဘူး။ ရာသီသွေးလာရင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ မသိတော့ဘူး။
၃။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားမှု ပျောက်ဆုံးလာပါတယ်။
နောက် အစားအသောက်တွေ လျှော့တယ်။ လျှော့တဲ့ခါကျတော့ ဆယ်ကျော်သက်ဆိုတာ လူကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့အတွက် အားယူနေတဲ့ကာလပေါ့နော်.. အဲဒီမှာ အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားမှုတွေ ပျောက်ဆုံးပြီးတော့ နောက် တစ်လျှောက်လုံးမှာ အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်.. ငါတို့က ယောက်ျားတွေထက် နိမ့်တယ်။ ငါတို့က ယုတ်ညံ့တဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်နေတာဆိုတဲ့ အစွဲနဲ့ တစ်သက်လုံး ပါသွားတော့တာပါပဲ။
ယုတ်ညံ့တယ်လို့ ထင်နေတဲ့အတွက် ဒါကို လူသိမှာစိုးတယ်။ ရှက်တယ်။ ရှက်တော့ ဘယ်မှ မသွားဘူး။ အိမ်မှာနေတယ်။ ဘယ်သူ့မှ ပေးမသိဘူး။ ဒီလိုမျိုးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဖြစ်လာတော့ အဲဒီကနေ တစ်ဆင့် ခုနက ပြောတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတယ်။
Related Article >>> “မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံချင်း ကွာပေမဲ့ အရာရာမှာအားနွဲ့နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။” ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ
[For Her Myanmar့  ကျင်းပမယ့် Women of Tomorrow ပွဲအကြောင်း အသေးစိတ် ကို ဒီမှာ ကြည့်လို့ ရပြီး ပွဲတက်ရောက်ဖို့ စာရင်းသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ သွင်းလို့ ရပါတယ်။]
၁။ ပိုပြီး နာကျင်ကိုက်ခဲစေပါတယ်။
နောက် ရေမချိုးရဘူး၊ ခေါင်းမလျှော်ရဘူးဆိုတာတွေက ရှိသေးတယ်။ လူက ဖုန်တွေ ပေပြီးတော့မှ ညစ်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်သူမဆို ရေချိုးချင်တယ်၊ ခေါင်းလျှော်ချင်တယ်လေ။ အဲဒါကို မလျှော်ရ၊ မချိုးရဘူးဆိုရင် ခေါင်းတွေကိုက်ပြီးတော့ နေလို့ထိုင်လို့ မကောင်းဘူး။ ဒါ ဖုန်ပေတာ၊ ချွေးထွက်တာလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။
ဒီလို ရာသီသွေးဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဒါတွေ မလုပ်ရဘူးဆိုတော့ လူက ပိုပြီး စိတ်ညစ်ညူးတယ်လေ။ လူရဲ့ Anxiety စိတ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ညစ်တာနဲ့ နာတာကို တုံ့ပြန်တာနဲ့က တိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ်။ ဆိုလိုတာက လူက စိတ်ပူပန်လေလေ၊ နာတာကို ပိုပြီးတော့ တုံ့ပြန်လေလေ၊ ပိုနာလေလေ ပေါ့နော်..
ဆိုတော့ ခုနက အယူအဆ အလွဲအမှားတွေ၊ ရေမချိုးရဘူး၊ ခေါင်းမလျှော်ရဘူး ဆိုတာတွေကြောင့် စိတ်ညစ်ညူးတယ်၊ ဘယ်မှလည်း မထွက်ရဘူး၊ အိမ်မှာပဲနေ၊ အခန်းထဲမှာပဲနေ၊ ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာပဲဆိုတော့ စိတ် ပို ညစ်ညူး၊ စိတ်ပိုညစ်တော့ ပိုပြီးတော့ ကိုက်ခဲနာကျင်.. ဆိုတော့.. ဒါကြီးက သံသရာလည်နေတာပေါ့နော်.. အဲဒါကြောင့် ဒါတွေက လွဲမှားပါတယ် ဆိုတာလေးကိုတော့ သိစေချင်တယ်။
၂။ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မရဘူး။
နောက်တစ်ခုက ကိုက်တာ ခဲတာပေါ့။ အဲဒါကလည်း အမျိုးသမီးတွေမှာ အတော်လေး ဒုက္ခပေးတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း အိပ်ရာထဲ လဲတာတွေထိပါ ဖြစ်တယ်။ တချို့ကျတော့ မသိမသာလေးပေါ့နော်.. မသိမသာလေးဆိုရင်တော့ ပြဿနာ မရှိဘူး။ တော်တော်ကိုက်တယ်ဆို ဆေးတွေ ဘာတွေ သောက်လို့ရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Mefenamic Acid ပေါ့နော်.. လွယ်လွယ်ကူကူလည်း ဝယ်လို့ရတဲ့အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးပေါ့။ သောက်လိုက်ရင် ကိုက်တာ၊ခဲတာ နည်းနည်း သက်သာသွားတယ်။ အိပ်ရာထဲ လဲရလောက်အောင် ဖြစ်တဲ့သူတွေကျတော့ သတိနည်းနည်း ထားရတယ်။ အဲဒါကျတော့ ရောဂါဖြစ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အလိုအလျောက် တုံ့ပြန်မှုပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူကြတော့။ သူတို့ကျတော့ ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် ရေနွေးအိတ်တွေ ဘာတွေ ကပ်လို့ရတယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ သောက်လို့ရတယ်။ သွားသွားလာလာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား၊ စိတ်ကို ပေါ့ပါးလာတဲ့ထိ နေလို့ရတယ်။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးရဲ့ Side Effect (ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး) က ဘာရှိတတ်လဲဆိုတော့ အစာအိမ် ထိတတ်တယ်။ အဲဒါက ဘယ်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးမှာမဆို အစာအိမ် ထိတယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ပေးတိုင်းမှာ ဘာပြောရလဲဆိုတော့ အစားနဲ့ တွဲသောက်ပေါ့နော်.. အစားမစားရသေးတဲ့အချိန်မှာ မသောက်နဲ့။ သူ့ရဲ့သဘောကိုက အစာအိမ် ထိတတ်တယ်ဆိုတော့ … သူက တစ်ကြိမ်လောက်သောက်ရုံနဲ့ မဖြစ်ဘူး။ နှစ်ကြိမ်လောက်သောက်လည်း မဖြစ်သေးဘူး။ အကြိမ်များစွာ သောက်မှ ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်.. ဖြစ်ကို ဖြစ်တတ်တဲ့ဟာ။
လူတွေက အဲဒီ အစာအိမ်ထိတတ်တယ် ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုပဲ မြင်ပြီး ကြောက်လန့်ပြီးတော့ မသောက်ကြတာမျိုးတွေ ရှိကြတယ်ပေါ့နော်.. တကယ်တော့ ဒါဟာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး မှန်ရင် ပါလာတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပဲ ထွေထွေထူးထူး ကြောက်စရာမလိုဘူး။ အစာနဲ့ တွဲသောက်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘာမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကို ကြောက်ပြီးတော့မှ တကယ့် အကိုက်အခဲပျောက်စေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို မရတော့မှာကို နည်းနည်း စိတ်ပူတယ်။
Related Article >>> ရာသီလာခြင်းနဲ့ ရှေးရိုးစွဲများ
ဒါဆိုရင် ရာသီလာတဲ့အခါ ဘာတွေ လုပ်ရမှာလဲ?
တကယ်တမ်း ရာသီသွေး လာနေတဲ့အချိန်မှာ ဘာတွေ လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ Active Lifestyle ဆိုတာက အရေးကြီးတယ်။ ဆိုလိုတာက သွက်သွက်လက်လက် သွားလာလှုပ်ရှားနေရင် ခံစားကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိုက်တာခဲတာတွေ၊ စိတ်ခံစားချက် အပြောင်းအလဲဖြစ်တာတွေအတွက် ပိုပြီးတော့ သက်သာစေတယ်။
Pad တွေဆိုရင် အနည်းဆုံး ၆နာရီတစ်ခါ၊ အကောင်းဆုံးကတော့ ၄နာရီ တစ်ခါ လဲပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ်။ ဒါလေးလည်း အရေးကြီးတယ်။
နောက် ကိုက်တာ၊ခဲတာ ရှိလာရင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်ပေါ့နော်..
အယူအဆအလွဲတွေကို ရှောင်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ အသိပညာ ရဖို့ဆိုရင်..
နည်းနည်းလေး မတူတော့တာက အရင်ခေတ်က ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကဆိုရင် ဒီအကြောင်းအရာကို သိဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အဖေ၊အမေ၊လူကြီးတွေဆီကပဲ ဒီအသိတွေက လာတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့က မသိတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း သူတို့က လွဲမှားနေတဲ့အခါ အဲ့ဟာတွေက ကိုယ့်ဆီရောက်လာရော.. ရှေးရိုးစွဲအယူအဆတွေ၊ လွဲမှားတဲ့ အသိပညာတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်…
ဒီနေ့ခေတ်ကျတော့ ဒီ Information ကို လက်လှမ်းမီတဲ့ နေရာတွေကလည်း အရမ်းများလာတယ်။ သတင်း မီဒီယာတွေရှိတယ်၊ ကျန်းမာရေး ဂျာနယ်တွေရှိတယ်။ ဒီခေတ်ဆို Facebook ပေါ့.. အဲဒါတွေကတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ မေးမြန်းလို့ ရှာဖွေလို့ရတယ်ပေါ့နော်… ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အသိပညာတွေကို လူကြီးတွေဆီကပဲ မဟုတ်ဘဲ တခြားနေရာတွေကလည်း ရှာဖွေဖို့ အကြံပေးချင်တယ်။
ခြွင်းချက်အနေနဲ့တော့ Facebook သုံးတဲ့နေရာမှာ တာဝန်က နှစ်ခု ရှိလိမ့်မယ်။ တစ်ခုကတော့ ရှာဖို့။ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ နည်းပညာတွေ၊ ဗဟုသုတတွေ ရှာဖို့ပေါ့နော်.. နောက်တစ်ခုကတော့ ရှောင်ဖို့။ ရှောင်ဖို့ဆိုတာ ခုနကလို ဂျင်း Message တွေကို ရှောင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်.. အဲဒီလို ဂျင်း message တွေကို ရှောင်နိုင်ဖို့ကတော့ ဘယ်သတင်းမီဒီယာတွေကနေ ထုတ်ပြန်တာလဲ၊ ဘယ်သူက ပြောတာလဲ ဒါတွေကိုပါ အကဲခတ်ပြီးမှ ယုံကြည်ဖို့ပေါ့နော်.. ဒါလေးတော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ကဲ.. ဒါကတော့ ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟက ယောင်းယောင်းတို့အတွက် အကြံပြုသွားတဲ့ စကားလေးတွေပါ။ ပန်းကလေး အဖွဲ့အစည်းက ကျင်းပတဲ့ “So What !?” (အဲ့တော့ ဘာဖြစ်လဲ) ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး ဓမ္မတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးရေးနဲ့ အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးအတွက် ကျင်းပတဲ့ ကမ်ပိန်းမှာ ဆရာနဲ့တွေ့လို့ အက်ဒ်မင်က ကိုယ့်ယောင်းယောင်းတွေအတွက် စပ်စုပေးခဲ့တာပါနော်.. မေးပေးတဲ့ အက်ဒ်မင် စပ်စုစိန်လေးကို ကျေးဇူးတင်ရင် မုန့်ကျွေးလို့ ရပါတယ်လို့ 😛
လိုငျးပျေါမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေး ကိစ်စပါ ပါတယျနျော..
ဒေါကျတာဖွိုးသီဟ လို့ဆိုလိုကျရငျ မြိုးဆကျပှား ကနျြးမာရေးတှကေို အသိပညာပေးနတေဲ့ ဆရာဝနျတဈယောကျ၊ လူငယျလေးတှအေတှကျ အသိပညာပေး စာတှေ ရေးသားပေးနတေဲ့ စာရေးဆရာ တဈယောကျရယျလို့ မွငျမိကွပါလိမျ့မယျ။ “ဓမ်မတာ လာခွငျး” နဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ရော.. ဆရာ့မှာ ဘယျလို အမွငျမြိုးတှေ ရှိနပေါလိမျ့…
ရာသီလာခွငျးက ရှကျစရာကောငျးတယျလို့ မွငျနကွေတဲ့ အမွငျတှေ နောကျမှာ
၁။ ကနျြးမာရေး ပွဿနာတှေ အမြားကွီး ရှိနပေါတယျ။
ဒီနိုငျငံရဲ့ ယဉျကြေးမှုမှာ ရာသီလာတယျဆိုတာကွီးက ရှကျစရာကောငျးတယျလို့ မွငျကွပါတယျ။ အဲဒီအမွငျကနေ ဘာဖွဈသှားလဲဆိုတော့ မိနျးကလေးတှကေ ရာသီလာလို့ရှိရငျ ဒါ ရှကျစရာကောငျးတယျပေါ့.. ဘယျသူ့မှ မပွောဘူး၊ အမတှေကေိုတောငျ မပွောဘူး ဆိုတာမြိုးတှေ ရှိတယျပေါ့နျော..တကယျတမျး Menstruation ဖွဈတယျ (ရာသီလာတယျ) ဆိုတာက မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ ဘဝတဈလြှောကျလုံးမှာ အကွီးမားဆုံး အပွောငျးအလဲလို့ ပွောလို့ရတယျ။ ဒါပွီးရငျ ထပျပွီးတော့ ကွီးကွီးကယျြကယျြ ပွောငျးလဲတယျဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ အကွီးမားဆုံး အပွောငျးအလဲ ဖွဈတယျဆိုတဲ့နရောမှာ ဘယျသူ့ရဲ့ အကူအညီ၊ ဘယျသူ့ရဲ့ အကွံဉာဏျပေးမှု၊ ဘယျက ဗဟုသုတမှ မရဘဲနဲ့ သူက ဒီဟာကို ဘယျလို Handle လုပျမလဲ။ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျဘူး။ အဲခါကတြော့ ဘာဖွဈလာလဲဆိုတော့ နောကျဆကျတှဲ ကနျြးမာရေး ပွဿနာတှေ အမြားကွီးတကျလာတယျ။
၂။ ဓမ်မတာ လာခွငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး မှနျကနျတဲ့ အသိပညာ မရကွပါဘူး။
အဲ့အပွငျ ဘာဖွဈသေးလဲဆိုတော့ တဈခုခု သိခငျြလို့ မေးမယျဆိုရငျလညျး သူ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ရှိတဲ့သူတှကေ မှနျကနျတဲ့ အဖွမေပေးနိုငျဘူး။ ဘာလို့ မပေးနိုငျလဲဆိုတော့ သူတို့ကိုယျတိုငျကလညျး မှနျမှနျကနျကနျ အသိပညာ မရှိဘူး။ ဘာလို့ မရှိလဲဆိုတော့ ခုနက ကြှနျတျောပွောခဲ့သလို ဒါကွီးက ရှကျစရာကောငျးတယျဆိုတဲ့ အယူကွောငျ့။ အဲဒီတော့ ဆကျပွီးတော့မှ ပွောကွမယျဆိုရငျ ကနျြးမာရေးအပိုငျးမှာ အားနညျးခကျြတှေ ရှိလာတယျ။ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ ဝနျဆောငျမှုတှေ မရလာဘူး။ ရာသီသှေးလာရငျ ဘယျလို လုပျရမလဲ မသိတော့ဘူး။
၃။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ တနျဖိုးထားမှု ပြောကျဆုံးလာပါတယျ။
နောကျ အစားအသောကျတှေ လြှော့တယျ။ လြှော့တဲ့ခါကတြော့ ဆယျကြျောသကျဆိုတာ လူကွီးတဈယောကျ ဖွဈဖို့အတှကျ အားယူနတေဲ့ကာလပေါ့နျော.. အဲဒီမှာ အဲဒီလိုတှေ ဖွဈတဲ့ခါကတြော့ ဘာဖွဈလဲဆိုတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုတှေ၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လေးစားမှုတှေ ပြောကျဆုံးပွီးတော့ နောကျ တဈလြှောကျလုံးမှာ အဆငျမပွတေော့ဘူးပေါ့နျော.. ငါတို့က ယောကျြားတှထေကျ နိမျ့တယျ။ ငါတို့က ယုတျညံ့တဲ့ ကိစ်စတှေ ဖွဈနတောဆိုတဲ့ အစှဲနဲ့ တဈသကျလုံး ပါသှားတော့တာပါပဲ။ယုတျညံ့တယျလို့ ထငျနတေဲ့အတှကျ ဒါကို လူသိမှာစိုးတယျ။ ရှကျတယျ။ ရှကျတော့ ဘယျမှ မသှားဘူး။ အိမျမှာနတေယျ။ ဘယျသူ့မှ ပေးမသိဘူး။ ဒီလိုမြိုးတှေ ဖွဈလာတယျ။ ဖွဈလာတော့ အဲဒီကနေ တဈဆငျ့ ခုနက ပွောတဲ့ နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာတှေ ဖွဈလာတယျ။
Related Article >>> “မိနျးကလေးတှဆေိုတာ ကြှနျတျောတို့နဲ့ ခန်ဓာကိုယျ တညျဆောကျပုံခငျြး ကှာပမေဲ့ အရာရာမှာ အားနှဲ့နတောမြိုးတော့မဟုတျပါဘူး။” ဆိုတဲ့ ဒေါကျတာ ဖွိုးသီဟ
၁။ ပိုပွီး နာကငျြကိုကျခဲစပေါတယျ။
နောကျ ရမေခြိုးရဘူး၊ ခေါငျးမလြှျောရဘူးဆိုတာတှကေ ရှိသေးတယျ။ လူက ဖုနျတှေ ပပွေီးတော့မှ ညဈပတျနတေဲ့အခြိနျမှာ ဘယျသူမဆို ရခြေိုးခငျြတယျ၊ ခေါငျးလြှျောခငျြတယျလေ။ အဲဒါကို မလြှျောရ၊ မခြိုးရဘူးဆိုရငျ ခေါငျးတှကေိုကျပွီးတော့ နလေို့ထိုငျလို့ မကောငျးဘူး။ ဒါ ဖုနျပတော၊ ခြှေးထှကျတာလောကျပဲ ရှိသေးတယျ။ ဒီလို ရာသီသှေးဆငျးနတေဲ့အခြိနျမှာ ဒါတှေ မလုပျရဘူးဆိုတော့ လူက ပိုပွီး စိတျညဈညူးတယျလေ။
လူရဲ့ Anxiety စိတျပူပနျမှု၊ စိတျဖိစီးမှု၊ စိတျညဈတာနဲ့ နာတာကို တုံ့ပွနျတာနဲ့က တိုကျရိုကျအခြိုးကတြယျ။ ဆိုလိုတာက လူက စိတျပူပနျလလေေ၊ နာတာကို ပိုပွီးတော့ တုံ့ပွနျလလေေ၊ ပိုနာလလေေ ပေါ့နျော.. ဆိုတော့ ခုနက အယူအဆ အလှဲအမှားတှေ၊ ရမေခြိုးရဘူး၊ ခေါငျးမလြှျောရဘူး ဆိုတာတှကွေောငျ့ စိတျညဈညူးတယျ၊ ဘယျမှလညျး မထှကျရဘူး၊ အိမျမှာပဲနေ၊ အခနျးထဲမှာပဲနေ၊ ဒီပတျဝနျးကငျြထဲမှာပဲဆိုတော့ စိတျ ပို ညဈညူး၊ စိတျပိုညဈတော့ ပိုပွီးတော့ ကိုကျခဲနာကငျြ.. ဆိုတော့.. ဒါကွီးက သံသရာလညျနတောပေါ့နျော.. အဲဒါကွောငျ့ ဒါတှကေ လှဲမှားပါတယျ ဆိုတာလေးကိုတော့ သိစခေငျြတယျ။
၂။ လိုအပျတဲ့ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု မရဘူး။
နောကျတဈခုက ကိုကျတာ ခဲတာပေါ့။ အဲဒါကလညျး အမြိုးသမီးတှမှော အတျောလေး ဒုက်ခပေးတယျ။ တခြို့ကတြော့လညျး အိပျရာထဲ လဲတာတှထေိပါ ဖွဈတယျ။ တခြို့ကတြော့ မသိမသာလေးပေါ့နျော.. မသိမသာလေးဆိုရငျတော့ ပွဿနာ မရှိဘူး။ တျောတျောကိုကျတယျဆို ဆေးတှေ ဘာတှေ သောကျလို့ရတယျ။
ကြှနျတျောတို့ Mefenamic Acid ပေါ့နျော.. လှယျလှယျကူကူလညျး ဝယျလို့ရတဲ့အကိုကျအခဲပြောကျဆေးပေါ့။ သောကျလိုကျရငျ ကိုကျတာ၊ခဲတာ နညျးနညျး သကျသာသှားတယျ။ အိပျရာထဲ လဲရလောကျအောငျ ဖွဈတဲ့သူတှကေတြော့ သတိနညျးနညျး ထားရတယျ။ အဲဒါကတြော့ ရောဂါဖွဈတာလညျး မဟုတျဘူး။ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အလိုအလြောကျ တုံ့ပွနျမှုပေါ့။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျမတူကွတော့။ သူတို့ကတြော့ ဘာလုပျလို့ရလဲဆိုရငျ ရနှေေးအိတျတှေ ဘာတှေ ကပျလို့ရတယျ။ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှေ သောကျလို့ရတယျ။ သှားသှားလာလာ လှုပျလှုပျရှားရှား၊ စိတျကို ပေါ့ပါးလာတဲ့ထိ နလေို့ရတယျ။
အကိုကျအခဲပြောကျဆေးရဲ့ Side Effect (ဘေးထှကျဆိုးကြိုး) က ဘာရှိတတျလဲဆိုတော့ အစာအိမျ ထိတတျတယျ။ အဲဒါက ဘယျအကိုကျအခဲပြောကျဆေးမှာမဆို အစာအိမျ ထိတယျ။ အကိုကျအခဲပြောကျဆေး ပေးတိုငျးမှာ ဘာပွောရလဲဆိုတော့ အစားနဲ့ တှဲသောကျပေါ့နျော.. အစားမစားရသေးတဲ့အခြိနျမှာ မသောကျနဲ့။ သူ့ရဲ့သဘောကိုက အစာအိမျ ထိတတျတယျဆိုတော့ … သူက တဈကွိမျလောကျသောကျရုံနဲ့ မဖွဈဘူး။ နှဈကွိမျလောကျသောကျလညျး မဖွဈသေးဘူး။ အကွိမျမြားစှာ သောကျမှ ဖွဈတဲ့ဟာမြိုးပေါ့နျော.. ဖွဈကို ဖွဈတတျတဲ့ဟာ။
လူတှကေ အဲဒီ အစာအိမျထိတတျတယျ ဆိုတဲ့ဟာကွီးကိုပဲ မွငျပွီး ကွောကျလနျ့ပွီးတော့ မသောကျကွတာမြိုးတှေ ရှိကွတယျပေါ့နျော.. တကယျတော့ ဒါဟာ အကိုကျအခဲပြောကျဆေး မှနျရငျ ပါလာတဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးပဲ ထှထှေထေူးထူး ကွောကျစရာမလိုဘူး။ အစာနဲ့ တှဲသောကျလိုကျရငျ အဆငျပွသှေားနိုငျတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ဘာမဟုတျတဲ့ဟာကွီးကို ကွောကျပွီးတော့မှ တကယျ့ အကိုကျအခဲပြောကျစတေယျဆိုတဲ့ဟာကို မရတော့မှာကို နညျးနညျး စိတျပူတယျ။
Related Article >>> ရာသီလာခွငျးနဲ့ ရှေးရိုးစှဲမြား
ဒါဆိုရငျ ရာသီလာတဲ့အခါ ဘာတှေ လုပျရမှာလဲ?
တကယျတမျး ရာသီသှေး လာနတေဲ့အခြိနျမှာ ဘာတှေ လုပျရမှာလဲဆိုတော့ Active Lifestyle ဆိုတာက အရေးကွီးတယျ။ ဆိုလိုတာက သှကျသှကျလကျလကျ သှားလာလှုပျရှားနရေငျ ခံစားကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ကိုကျတာခဲတာတှေ၊ စိတျခံစားခကျြ အပွောငျးအလဲဖွဈတာတှအေတှကျ ပိုပွီးတော့ သကျသာစတေယျ။
Pad တှဆေိုရငျ အနညျးဆုံး ၆နာရီတဈခါ၊ အကောငျးဆုံးကတော့ ၄နာရီ တဈခါ လဲပေးနိုငျရငျ ပိုကောငျးတယျ။ ဒါလေးလညျး အရေးကွီးတယျ။
နောကျ ကိုကျတာ၊ခဲတာ ရှိလာရငျ အကိုကျအခဲပြောကျဆေး သောကျပေါ့နျော..
Related Article >>> ညီမလေးတို့ ရာသီလာစဉျ ကိုကျခဲတာ သဘာဝပဲလား?
အယူအဆအလှဲတှကေို ရှောငျပွီး မှနျကနျတဲ့ အသိပညာ ရဖို့ဆိုရငျ..
နညျးနညျးလေး မတူတော့တာက အရငျခတျေက ကြှနျတျောတို့ ငယျငယျကဆိုရငျ ဒီအကွောငျးအရာကို သိဖို့ဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့ အဖေ၊အမေ၊လူကွီးတှဆေီကပဲ ဒီအသိတှကေ လာတယျ။ ဆိုတော့ သူတို့က မသိတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတျလညျး သူတို့က လှဲမှားနတေဲ့အခါ အဲ့ဟာတှကေ ကိုယျ့ဆီရောကျလာရော.. ရှေးရိုးစှဲအယူအဆတှေ၊ လှဲမှားတဲ့ အသိပညာတှနေဲ့ ကွီးပွငျးလာတဲ့အခါ ဖွဈတတျတာပေါ့နျော…
ဒီနခေ့တျေကတြော့ ဒီ Information ကို လကျလှမျးမီတဲ့ နရောတှကေလညျး အရမျးမြားလာတယျ။ သတငျး မီဒီယာတှရှေိတယျ၊ ကနျြးမာရေး ဂြာနယျတှရှေိတယျ။ ဒီခတျေဆို Facebook ပေါ့.. အဲဒါတှကေတဈဆငျ့ ကြှနျတျောတို့ မေးမွနျးလို့ ရှာဖှလေို့ရတယျပေါ့နျော… ဆိုတော့ ကိုယျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေး အသိပညာတှကေို လူကွီးတှဆေီကပဲ မဟုတျဘဲ တခွားနရောတှကေလညျး ရှာဖှဖေို့ အကွံပေးခငျြတယျ။
ခွှငျးခကျြအနနေဲ့တော့ Facebook သုံးတဲ့နရောမှာ တာဝနျက နှဈခု ရှိလိမျ့မယျ။ တဈခုကတော့ ရှာဖို့။ သတငျးအခကျြအလကျနဲ့ နညျးပညာတှေ၊ ဗဟုသုတတှေ ရှာဖို့ပေါ့နျော.. နောကျတဈခုကတော့ ရှောငျဖို့။ ရှောငျဖို့ဆိုတာ ခုနကလို ဂငျြး Message တှကေို ရှောငျနိုငျဖို့ပေါ့နျော.. အဲဒီလို ဂငျြး message တှကေို ရှောငျနိုငျဖို့ကတော့ ဘယျသတငျးမီဒီယာတှကေနေ ထုတျပွနျတာလဲ၊ ဘယျသူက ပွောတာလဲ ဒါတှကေိုပါ အကဲခတျပွီးမှ ယုံကွညျဖို့ပေါ့နျော.. ဒါလေးတော့ လိုပါလိမျ့မယျ။
ကဲ.. ဒါကတော့ ဒေါကျတာ ဖွိုးသီဟက ယောငျးယောငျးတို့အတှကျ အကွံပွုသှားတဲ့ စကားလေးတှပေါ။ ပနျးကလေး အဖှဲ့အစညျးက ကငျြးပတဲ့ “So What !?” (အဲ့တော့ ဘာဖွဈလဲ) ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီး ဓမ်မတာနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ကနျြးမာရေး အသိပညာပေးရေးနဲ့ အမြိုးသမီး စှမျးဆောငျရညျ မွှငျ့တငျရေးအတှကျ ကငျြးပတဲ့ ကမျပိနျးမှာ ဆရာနဲ့တှလေို့ အကျဒျမငျက ကိုယျ့ယောငျးယောငျးတှအေတှကျ စပျစုပေးခဲ့တာပါနျော.. မေးပေးတဲ့ အကျဒျမငျ စပျစုစိနျလေးကို ကြေးဇူးတငျရငျ မုနျ့ကြှေးလို့ ရပါတယျလို့ 😛
Tags: Dr.Phio Thiha, facts, Interview, Menstruation, myths
Wathun March 6, 2019